Archives aJune 2021
Yakavhurika-sosi ecommerce mapuratifomu anopa mabhizinesi sarudzo inogoneka yekutanga chitoro chepamhepo, ine nharaunda dzinotsigira dzinotsigira, maitiro-ezviwanikwa, uye madhairekitori evatatu-bato vanogadzira. Heino rondedzero yeakavhurika-sosi ecommerce mapuratifomu. Kune matsva uye akasimbiswa mapuratifomu ane epamberi musimboti maficha, customizable themes, uye maraibhurari ekuwedzera. Zvizhinji zvezvishandiso izvi zvakare zvakabata shanduro dzebhizinesi. Vhura Source Ecommerce Platforms WooCommerce inochinjika, yakavhurika-sosi yekutengesa chikuva yakavakirwa pane iyo WordPress yemukati manejimendi system. WooCommerce inouya yakaunganidzwa nekugona kugamuchira makuru ekiredhiti makadhi, kuendesa kubhangi, cheki, uye mari pakutumira, ine 140 dunhu-chaiwo magedhi. Tengesa zviri nyore zvigadzirwa zvemuviri, kugadzwa, uye nhengo-chete zvedhijitari. WooCommerce inopa otomatiki mutero […]
Maitiro Ekuratidza Chigadzirwa Ratings muGoogle Ads
Ndanga ndichitsvaga seti yemadumbbells anogadzirika ejimu yangu yekumba. Ndakatsvaga paGoogle ndikaona zvishambadzo izvi. Google yekutsvaga mhinduro ye "adjustable dumbbell set." Pa $299.99 uye pamusoro, ma dumbbells haana kudhura. Uye kukanganwa nezvekutsvaga mutengo wekutengesa unopiwa kudiwa kukuru. Zvisinei, handina kukwanisa kuita asi kucherechedza nyeredzi dzeyero dzevashambadziri vaviri. Nyeredzi mutsauko wakasimba wekuona kubva kune mimwe mibairo yekutsvaga. Uyezve, Bowflex, ine "9K +" zviyero zveavhareji ye4.5 nyeredzi, inoratidzika seyo inonyanya kupa. Ko Bowflex yakaita sei kuti nyeredzi dzakakosha idzi dzioneke mumashambadziro ayo? Ini ndichatsanangura mune izvi […]
Chat mabhuru ari kuuya kuMicrosoft Matimu e Windows 10
Microsoft yazivisa kuti vachakurumidza kuunza mabhaidhi ekukurukura kuMicrosoft Teams. Parizvino kuti uone mameseji panguva yekufona kwevhidhiyo unofanirwa kuvhura hwindo rehurukuro, asi nechinhu chitsva, hurukuro dzinotumirwa panguva yemusangano wemaTimu dzinozoonekwa pamasikirini evatori vechikamu vemusangano, zvichiita kuti hurukuro ive yepakati pakukurukurirana. Izvi zvinobvumidza varipo kuti vatore chikamu vasina kusvetuka neshoko. Iyo ficha iripo nekukanganisa, asi vatori vechikamu vanozviona zvichikanganisa vanogona kuzvidzora kuburikidza nemenu yemusangano. Microsoft yakawedzera chimiro ku Microsoft 365 roadmap muna Kubvumbi uye ichave ichienderera mukati maChikunguru uye icha […]
Ndichiri paWWDC 2021, Apple yakaunza chinhu chitsva cheMac. Zvakanaka, hunyanzvi, ndeye iPad zvakare, asi inogoneswa neiyo macOS Monterey software yekuvandudza. Inodaidzwa kuti Universal Control, ichakubvumidza iwe kudzora akawanda maApple zvishandiso, senge iMac, MacBook, uye iPad, ese ane imwechete keyboard uye mbeva. Hezvino zvaunofanira kuziva. Chii chinonzi Universal Control? Apple iri kuvandudza yayo Kuenderera mberi system neUniversal Control. Iyo inokutendera kuti ushande negonzo rimwe chete uye kiibhodhi uye kufamba pakati peMac nePadad kune isina musono ruzivo, hapana kuseta kunodiwa. Unogona kudhonza nekudonhedza zvirimo pakati pemidziyo, negonzo rako richifamba […]
Iyo yazvino OneDrive maficha anotarisa pakugadzirisa mafoto uye manejimendi. Zvaunoda kuziva Microsoft yakazivisa mashoma mashoma maficha ane ichangoburwa yekuvandudza kuOneDrive. Zvese zviri zviviri webhu uye nharembozha zvino zvinosanganisira yakakosha mafoto edhita. Microsoft iri kuratidzawo chinhu chekukanda uye ari kuuya anoronga mafoto. Microsoft iri kuvhura akati wandei maficha eOneDrive kuti zvive nyore kune vashandisi kubata mafoto avo. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha zvinouya kuOneDrive ifoto edhita. Kunyange isina kusimba senge inopihwa muGoogle Photos, inopa vashandisi mabasa ekutanga ekugadzirisa sekudyara, kuwedzera kutenderera, uye kwakasiyana mwenje uye kugadzirisa kwemavara. Kubva […]